Tirada derbi jiifta England oo sare u kacday - BBC Somali
Tirada derbi jiifta England oo sare u kacday
Lahaanshaha sawirka SAM MELLISH
Image caption Darbi jiifta ayaa u badan dad qaba xanuunnada dhimirka
In ka badan 4,000 oo qof ayaa habeenkii jiifta derbiyadda England, tiradaasi oo 16% ka badan tii sanadkii hore.
Tirakoob ay samaysay waaxda qowmiyadaha iyo dowladda hoose, ayaa muujineysa in inkabadan kala bar deegaannada England ay diiwaangeliyeen sare kac dadka derbi jiifka ah, marka loo eego tirada dadkaasi ee sanadkii hore.
Dowladda ayaa sheegtay in ay ka go'antahay wax ka qabashada dhibaatadaasi, ayna £550 milyan ugu talagashay si wax looga qabto dadkaasi.
Cilmi baaris ay samaysay hay'adda St Mungo ee qaabilsan dadka hoy la'aanta ah, ayaa lagu ogaaday in afar ka mid ah tobankii qof ee derbi jiif ah ay qabaan xanuunnada dhimirka, halka tiro badan oo ka mid ah dadkaasi ay daroogada isticmaalaan.
Madaxa hay'adaasi, Howard Sinclair, ayaa sheegay in dhimidda dhaqaalaha ay dowladda ku bixiso adeegyada dhimirka, ay gacan ka geysatay sare u kaca tirada derbi jiifta.